Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment प्रहरीले किन बोलायो रामकुमारी झाँक्रीलाई ? - Pnpkhabar.com
प्रहरीले किन बोलायो रामकुमारी झाँक्रीलाई ?
काठमाडौं, २९ माघ : नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि प्रहरीले बोलाएको छ । प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाए पनि झाँक्रीले महानगरीय अपराध महाशाखा जान अस्वीकार गरेकी छिन् ।
केही दिनअघि गोरखामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर ओली समूहको अखिल नेपाल महिला सङ्घले झाँक्रीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाएको हो । (हिजो) बुधबार काठमाडौंमा भएको प्रचण्ड-नेपाल समूहको आमसभामा झाँक्रीले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोपको विरोध गरेकी थिइन् ।